Duulaa Oromoo irratti Adda Biraan Gaggeeffamaa jiru | Oromo Freedom News and Views
← The Escalation of war of Ethnic Cleansing on the Oromo People
Xalayaa seenaa dhugaa ibsu moo kan Oromummaa diiguuf qophaaye dha? →
Duulaa Oromoo irratti Adda Biraan Gaggeeffamaa jiru
Caamsaa 25, 2013
Baha Oromiyaatti Liyyuu poolisi kan jedhaman wayyaanen bobbaaftee uummata oromoo dararaa jiraachuun ammaaf ifaadha. Waan akana fakkaatu dhiyoo tana jiddu galeessa oromiyaa Aanaa Fantaallee karrayyuutti Waraana addaa liyyuu poolis jedhamu dhalattoota Amaaraa qofarraa jaarame daangaa oromiyaa fi naannoo amaaraa jidduu qubsiisee ture. Uummanni akkuma poolisa mootummaatti hubachaa ture. Naannoo kanatti lola bara minilik irraa eegalee hanga ammaa hin dhumin tu oromoof amaara jidduutti guyyaa guyyaan deema. Humni waraanaa kun yeroo saboonni kun lamaan wal lolan oromoota tooftaa /ogummaa/ waraanaa hin qabne yeroo hundaa haxxeedhan fixaa jiru. Maqaa waldaa dargaggoota Aanaa minjaar jedhuun waraana biraa qaamni kun ijaaree oromoota lolaan lafarraa buqqisanii bakka Eddoo guddoo jedhamu qubsiisan. Bisaan jallisiidhaan mootummaan naannoo oromiyaa baase, uummata fayyadamuu dhoorkanii waraanni kun irra qubatee daldala hoolaa fi oomisha kuduraaf muduraa bal’inaan deemsisaa jiran. Mooraa leenjii waraanaa bal’aa fi mul’ataa ta’e bananii dargaggoota Amaaraa leenjisaa jiru.
Meeshaalee gurguddaa uummanni kun duraan ittiin wal lolee hin beekne fiduudhaan oromoonni haalan miidhamaa jiru. Bakka waraanni kun qubaterraa baatii baatidhaan kiiloo meetira 20 baqachaa jiran. Mootummaan naannoo oromiyaa yeroo 4 oli waraana kana akka asii kaasan gaafatee Federaalarraa deebii akka dhabeen poolisoota aanaa fidee qubattoota kana akka bakka kana gadi dhiisan itti himnaan lola bananii poolisoota 2 ajjeesanii hedduu madeessan. Ergasii eegalee namni isaan gaafates kan dubbises hin jiru. Dhalattoota Amaaraa bakka biraatii fiduudhaan meeshaa fi lafa safaranii kennaa jiru. Haala kanaan daangaa oromiyaa guyyaa guyyaan seenaa jiru. Waraanni kun shaakala leenjii isaa uummata oromorratti bahaa jira. Yeroo hunda dubartootaa fi daa’immanis osoo hin jenne nama karaa deemu haxxeedhan ajjeesaa jira. Erga waraanni kun as qubatee oromoota wagga 1 keessatti dhuman kan reeffi argame 76. Kana keessaa 6 dubartoota yoo ta’an 3 daa’imman bakka horii tiksanitti billaan qalamaniidha. Hedduun haala du’a saanii osoo hin beekin kan dhabaman 10 oli.
Humni kun yeroo marsaa leenjii saa xumurate hunda bobbaafamee horii Oromoo saamee ittiin bashannana. Amma dhiyootti kan isaan saaman akka kanatti keenye.
Lak. Gosa horii saamame Hanga horii saamame Bakka irraa saamame Abbaahorii Qaama saame Guyyaa saamame Nama gaafas du’e
1 Loon 10,000 Ganda dheebitii bakka qurquraa mudhii jedhamu Boruu Okoluu Liyyuu poolisii 15/04/2013 Umar Boruu, kaawoo Roobaa
2 Re’ee 70,000 dheebitii bakka qurquraa mudhii jedhamu Fantoo Dammee
3 Loon 8,953 Ganda qararrii harooressa qal’aa Leedii Arusoo 26/04/2013 Roobaa godaanaa
4 Re’ee 5,000 Ganda qararrii bakka Leedii roobaa jedhamu Goobaa Raaree 27/04/2013 Daa’ima 1 albeen qalame
5 Harree 7 Ganda haroo qarsaa bakka Aartuu jedhamu Boruu Roobaa 11/05/2013
6 Sangaa 9 haroo qarsaa bakka Aartuu jedhamu Jiloo Fantaalle, Waaqoo 11/05/2013
Horii kana deebisuuf iyyannaan oromootaa deebii argachuu dhiisee abbootii horiin irraa fudhatame nama 4 hidhanii jiru. Sababni hidhaa isaanii gaafa horiin saamamu waan humna waraanaa kana loltaniif jedhame.
Sababuma kanarraa ka’uudhaan Ajajaa humna addaa wayyaanee kan ta’e Dammallaash shankore jedhamu humna ummtaan ajjeefamee motora saa gubamee jira. Gafatama dhiyeessii human kanaa fi Bakka bu’aa dhaaba Amaarotaa MORESH jedhamu Tamaam magaalaa Woolancitii keessatti humna ummtaan ajjeefame jira.
20/05/2013 lola naannoo Goda Micciitti humna ummtaa fi loltoota humna addaa Wayyaanee gidduutti ta’een loltoota human addaa 3 ajjeefamee kan madaaye hanga hin beeknu. Qaweee 1 humna adda Wayyaanee irraa humna ummtaan hiikkamee jira.
Sababa kanaan sakattaa hamaa uummatarratti bananii barattoota fi tikfataa shiftoomsaa
Posted on 25/05/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink.	Leave a comment.